အင်းစိန်ထောင်အတွင်း COVIDကူးစက်မှု ရှိနေသော်လည်း သီးသန့်ဆောင်အတွင်း ထပ်မံကူးစက်မှုမရှိ - Myanmar Pressphoto Agency
Covid_19 InseinPrison MPA Myanmar
ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်ဗဟိုအကျဥ်းထောင်အတွင်း COVID-19 ကူးစက်မှုများ ရှိနေသော်လည်း နိုင် ငံရေးအကျဥ်းသားများထားရှိရာ သီးသန့်ဆောင် အတွင်း ထပ်မံကူးစက်မှု မရှိကြောင်း သတင်းရ ရှိသည်။
ယင်း သီးသန့်ဆောင်အတွင်း ဒေါက်တာမော်မော်ဦးနှင့် NLDဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပြီးနောက် ထပ်မံကူးစက်သူ မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
” ထောင်ထဲမှာတော့ တချို့အကျဥ်းသားတွေ ပိုးတွေ့တာရှိတယ်။ ၄၀ ကျော်လောက်တော့ရှိပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီသီးသန့်ဆောင်က ထပ်တွေ့တာတော့ မရှိဘူး။ ” ဟု ရန်ကုန်တိုင်း အကျဥ်းဦးစီးဌာန အဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ဦးက MPAသို့ပြောသည်။
ယင်း သီးသန့်အဆောင်သည် နိုင်ငံရေးအကျဥ်း သားများ သီးသန့်ထားရှိပြီး ရွှေညဝါ ဆရာတော်၊ ယခင် လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်း အပါအဝင် NLD ပါတီဝင် နိုင်ငံရေးသမားအများစုအား ချုပ်နှောင်ထားကြောင်း သိရသည်။
အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသည့် Frontier Myanmar သတင်းဌာန၏ အယ် ဒီတာ အမေရိကန်နိုင်ငံသား Daniel Fenster အား COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံနေရသည်ဟု ၄င်း၏ ရှေ့နေက ပြောဆိုခဲ့ခြင်းများအပေါ် ကူးစက်ခံရခြင်း ရှိ/မရှိ စစ် ဆေးဆဲဖြစ်ကြောင်းနှင့် အတည်ပြုနိုင်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်း ၄င်းက ပြောဆိုသည်။
အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ကူးစက်မှုများ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် အချုပ်တရားခံများ တရားရုံးချိန်းများ ပိတ်ပင်ထားပြီး သီးသန့်ဆောင်အား ဇူလိုင်လ ဒတ်ယအပတ်ကပင် ၂ပတ်ကြာ lockdownပြုလုပ် ထားကြောင်း သိရသည်။
#အင်းစိန်ထောင် #သီးသန့်ဆောင် #ကူးစက်မှုမရှိ #COVID-19 #MPA
No New Infections in Insein Solitary Dorm Despite Infections in the Prison
No new infections were found in the solitary dormitory where political prisoners are detained even though infections continue in Insein Central Prison, Yangon.
Since Doctor Maw Maw Oo and NLD Central Executive U Nyan Win were infected, no new infections have been found in that solitary dormitory.
“There are infections among some prisoners, about over 40. But no new cases from the solitary dorm,” saidahigh-ranked prison department official to MPA.
Political prisoners are detained in that dormitory including Shwe Nya Sayadaw, former minister of Social Affairs U Naing Ngan Lin and most NLD politicians.
Following claims by his lawyer that Deniel Fenster who is American and editor of the Frontier Myanmar News Media, contracted COVID-19 in Insein Prison, he has been tested to confirm whether he is infected or not and they are waiting for the result, he continued.
In order to control infections in Insein Prison, court appointments for defendants have been put on hold and the solitary dorm was locked down for two weeks in the second week of July.
#InseinPrison #SolitaryDorm #NoInfections #COVID-19 #MPA